एप्पलले नोकर चाकर चोरी मुद्दामा आफूलाई बचाउँछ। | म म्याकबाट हुँ
एप्पलले नोकरको चोरी चोरी मुद्दामा आफैलाई बचाउँछ।
त्यो एप्पललाई चोरी गरेको आरोप छ, हार्डवेयर, सफ्टवेयर र प्याटेन्टमा सामान्य छ। कि उनिले उही चीजको लागि उनको निन्दा गर्‍यो, तर एप्पल टिभीसँग सम्बन्धित उत्पादनको साथ, केहि कमसेकम छक्क पर्ने छ। सर्भेन्ट श्रृंखला जुन प्लेटफर्मका प्रयोगकर्ताहरूले धेरै मन पराउँछन्, चोरी चोरीको लागि पहिले नै रिपोर्ट गरिएको छ.
जनवरीमा, एप्पल टिभी + र त्यसकारण एप्पललाई नोकर श्रृंखलाको सम्बन्धमा चोरीको अभियोग लगाइएको थियो। यो गुनासो मा उल्लेख छ कि यो श्रृंखला यो अघिल्लो चलचित्रको प्रतिलिपि हुन सक्छ। यो उजुरी गर्ने व्यक्तिको दृष्टिकोणबाट सधैं स्पष्ट हुन्छ।
नौकर सिर्जनाकर्ताहरूले विचार र प्लटको प्रतिलिपि गर्न सक्दछन् इमानुएलको बारेमा सत्यता.
इमान्वेलको बारेमा सत्यता। एप्पलको बिरूद्ध सर्ब शृंखलाका लागि चोरीको मुद्दा मुद्दाको विषय
फ्रेन्च ग्रेगोरिनीले एप्पलको निन्दा गरे किनभने उनको अनुसार, नोकर श्रृंखला मा आधारित छ र आफ्नो कल २०१ called बाट एक फिल्मको प्रतिलिपि गर्छ यो सत्य इमानुएलको बारेमा. एप्पलले तुरुन्त प्रतिक्रिया देखायो र अदालतलाई लगाइएको मुद्दा खारेज गर्न आग्रह गरेको छ, धेरै कारणहरू उद्धृत गर्दै तपाईं यो लिंकबाट पढ्न सक्नुहुन्छ।
२०१ 2013 को फिल्म र एप्पल टिभीले प्रसारण गरिरहेको श्रृ both्खला दुबैमा, एक दर्दनाक बुबा देखाइएको छ जसले एक बच्चाको हेरचाहको लागि बच्चाको भाडामा राख्छ जो एक धेरै यथार्थपरक पुतली हुन जान्छ। एप्पल यस गुनासोको बिरूद्ध आफैंको नखले रक्षा गर्दैछ, हामी रक्षा संक्षिप्त मा पढ्न सक्नुहुन्छ रूपमा:
वादी फ्रान्सेस्का ग्रेगोरिनीको मुद्दा त्यो जुनूनी अठोटको अर्को उदाहरण हो, त्यसैले लेखक र रचनाकारहरू बीच यति सामान्य। जसमा उसको कार्यहरू र कुनै अन्य पछि देखा पर्ने सबै समानताहरू अनिवार्य रूपमा चोरी चोरीलाई जिम्मेवार मान्नुपर्दछ।
र जारी रहन्छ:
त्यहाँ दुई काम बीच धेरै अन्य भिन्नताहरू छन्। चलचित्र यो इमानुएलको परिप्रेक्षमा आधारित छ, वास्तवमा यो फिल्म उसको भ्वाइसओभरबाट सुरु हुन्छ। चाकरमा, परिप्रेक्ष्य यसको विपरित हो, किनकि श्रृंखला लेनले को (वा के हो) को अन्वेषण गर्छ र उनी कहाँबाट आईन् भन्ने कुरा पत्ता लगाउँदछ।
जबकि फिल्म र श्रृंखला अधिक वा कम रैखिक कालक्रममा हुन्छ, यो कानूनको अधीनमा सुरक्षित हुने कुरा होईन। इमान्वेल र सर्भेन्टको मुख्य विषयवस्तु, दुखाइ र भ्रम भन्दा बाहिरका, एकदम फरक छन्। इमानुएल र लीन लगभग सबैजसो समान छैनन् ... केहि साझा जेनेरिक र असुरक्षित लक्षण पछाडि शायद धेरै फरक हुन सक्छ।
अन्तिम शब्द न्यायाधीशको हो। हामी घटनाहरू कसरी देख्छौं भनेर पर्खनेछौं र हामी तपाईंलाई यसको बारेमा बताउनेछौं।
लेखको पूर्ण मार्ग: म म्याकबाट हुँ » एप्पल उत्पादनहरू » Apple TV » एप्पलले नोकरको चोरी चोरी मुद्दामा आफैलाई बचाउँछ।
यस नि: शुल्क अनुप्रयोगको साथ तपाईंको भिडियोबाट अडियो निकाल्नुहोस्
एप्पल टिभीमा चाँडै आउँदैछ: स्वान सॉन्ग, महेरशाला अली अभिनित।